WAA MAXAY MAGACA BUKAANKA YARYAR EE YARYAR: WAA MAXAY DHIRTA YARYAR, MAXAY UBAX YAR YAR U EKAAN KARTAA SAWIRKA, MAXAY YIHIIN NOOCYO KALA DUWAN, WAXA XIISO LEH OO KU SAABSAN DAREEMKA MACAAN EE MADOW? - SOOSAARKA DALAGGA
Xayawaan-dhejis. Waa maxay noocyada kala duwan ee ubaxyo yar yar loo yaqaan oo waa maxay sifooyinka?
Dhuxusha dhulkayagu waa mid kala duwan. Waxaa jira dhirta duurjoogta ah iyo kuwa gudaha ah oo loo habeeyay inay ku noolaadaan dheryo yaryar, waxaa jira kuwa si fudud loo qurxiyo. Ubax kasta waa qurux badan oo gaar ah oo u gaar ah.
Waa maxay neef-qabatin-yar-yar-yar-yar iyo sida loo habboon u-ilaaliyo - u akhri maqaalkayaga.
Mini-petunia waxay leedahay lahjadaha Petunia. Daabacaadyadani waa mid dhoobo-qaabaysan ama u eg sida dhirta cagaarsho leh oo leh hindhis ama qallayl.
Macaamiisha yaryar waxaa iska leh qoysaska habeenkii, taas oo macnaheedu yahay in ay fududahay in ay u koraan sidii guri guri aan la ogayn.
Petunia waxaa laga helay 1770 meel u dhow dhulalka Uruguay. Maalmahan, qaababka hybrid ee ubaxa ayaa la soo bandhigaa. Bilowga nidaamkaan ayaa la dhigay 1835. Natiijo ahaan, duulimaad, noocyo badan oo ubaxyo ah oo badan oo ubax ah ayaa "ku dhashay".
Noocyo kala duwan, muuqaalada iyo sawirro
Mini-petunia waxaa sidoo kale loo yaqaannaa cambaarta iyo yar yar. Kala duwan ayaa leh qaababka soo socda:
Cabbirta ubaxa waxay gaartaa wax aan ka badneyn 4-5 cm, laakiin waxay ku badan yihiin dhirta oo dhan, taas oo siineysa qaabka kubad weyn oo cajiib ah.
Caleenta ayaa si buuxda looga lumi karaa quruxda badan ee quruxda badan.
Cabbirka caleemaha ayaa gaaban marka la barbardhigo noocyada caadiga ah. Waxyaabaha aan ka badnayn 20 cm, iyo noocyo dhaadheer waxay leeyihiin laanta 30-35 cm dheer.
Dhammaan noocyada mini-petunia waxay leeyihiin sicir korodh oo sareeya waxaana lagu gartaa ubax dheer.
Qalabka warshadu waa mid aad u adag oo qoryo leh, on iyo caleemaha aad ka arki kartaa timaha gaaban ee cufan.
Carmada madow mugdi ah
Tani waa warshad aad u yar. Waxay horey u soo saartaa shaacinta isku mar ee dhowr burooyinkood mar. Buundada lafdhaqaaqa, llorescences funnel leh dhexdhexaad ah 4-5 cm, waxay leeyihiin midab xiiso leh - salmon. Warshadda waxaa lagu qurxiyaa balakoonka iyo guntooda. Kala duwanaanshaha ayaa leh iska caabin aad u sareeya ee xaaladaha cimilada.
Dhererka warshad waa 25-35 cm, taxanahan waxay ka kooban tahay qaababka hybrid oo ah 25 midabo kala duwan. Waxaa jira ubaxyo leh xididlo dhalaalaya, oo leh dhexda dhalaalaya, monophonic iyo geeso madow.
Fantasy F1 buluug
Tani waa petunia teraabi ah oo leh ubax yar yar (2.5-4 cm dhexroor), dhirirka dhirta 20-25 cm. Muuqaal aad u kala duwan ayaa ah ubax iyo baraf diidmo badan.
Cinderella F1 Dhaqdhaqaaqa
Kala duwanaansho waa baadiyaha oo leh tiro badan oo caws ubax ah. Cabbirka baadiyaha ee dhererka 20 cm Calaacal ubax ah - jilicsan. Waxyaabaha kala duwan waxay u baahan yihiin nafaqooyin badan oo daryeela.
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee mini-petunia Cinderella F1 Violet waxaa laga heli karaa fiidiyaha waxtarka leh:
Qurxinta daryeelka dwarf
Taxanahan ubaxyada ah waxaa lagu abuuri karaa dheryaha iyo sanduuqyada balkoonka, iyo meel sariiraha ubaxa ah oo ku haboon. Warshad waxaa lagu beeray geedo bishii Febraayo - Abriil.
Marka aad iibsaneyso abuurka, xusuusnow in ay ku jiraan granules. Waxaa la daboolay qaab fudud oo la isku dhexdhigay oo fududaynaya geedi socodka beeridda iyo koritaanka.
Pellets waa in lagu dhajiyaa dusha sare ee waxoogaa hoos u dhigma oo la soo daayo substrate. Ka dib markii ay jirto qoyaan badan oo laga helo buufin iyo dheriyo ayaa lagu daboolay dhalada. Ha u oggolaan in qalajinta ee jaakad abuur.
Caleemaha ugu horeeya waxaa laga arki karaa 1.5-2 usbuuc iyadoo la ilaalinayo heerkulka gudaha gudaha 22-24 ° C iyo nal ku filan. Qorraxda tooska ah ee dheriga waa wax aan la aqbali karin.
Geedo waxay u baahan yihiin in la qoyo oo la qaado qashinka koritaanka, marka caleemo 2-3 goor hore loo sameeyay. Kadib ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo bacriminta adag oo ay ku jiraan birta iyo raadadka raadadka si degdeg ah ee xididdada iyo dardargelinta geedi socodka ubaxa. Waqtiga ubaxa waxaa la saari karaa iyadoo la badalayo dhererka maalinta iftiinka.
Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka dhirta iyo horumarka ayaa la tixgelin doonaa horaantii 16-18 ° C. Geedo lagu meeleeyo dhulka kaliya ka dib dhamaadka dhaxan.
Bacaha ugu haboon ee noocyada kala duwan waa iftiin, bacrin ah, ku filan in la nadiifiyo, halka qorraxdu soo baxdo muddo dheer. Goobta waa in laga ilaaliyo dabaysha.
Salmon Cannoon wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah iyo bacarimiso hal mar kasta 1.5 isbuuc.
Waa suurtogal in la bilaabo tirinta 7 maalmood ka dib marka laga beerto geedo iyo ilaa bisha Agoosto. Waraabinta waxaa loo baahan yahay dhexdhexaad, sababtoo ah ubax ma aqbalin biyo-qoyan. Sida geedka kasta, petunia waxay u dulqaadan kartaa tiro cuduro ah waxayna la dagaalamaan weerarka cayayaanka. Daryeelka saboolka ah, ubaxa waxaa laga yaabaa inuu xanuunsado:
Qoyaan qoyan iyo cawl. Astaamaha cudurka ayaa noqon doona muuqaalka ubaxa, caleemaha iyo jirridaha dhibco cawlan oo fudud, taas oo wakhti ka dib la dabooli karo patina cirfiidka leh. Sababta ugu weyn ee cudurka - heerkulka hoose, qoyaan sare, nitrogen xad-dhaaf ah ee ciidda. Si looga fogaado cudurka waa in aan loo oggolaanin inuu soo dego. Waa naxariis, laakiin dhirta jirran ma awoodi doonto inay soo kabsato. Foornada waxaa loo isticmaalaa in lagu beero ubax kale.
Aphids. Waxaad isticmaali kartaa sunta cayayaanka ama geeddi-socodka warshad biyo ah.
Caarada budada ah. Waxuu dhici karaa sababtoo ah isbeddelka heerkulka isbeddelka ah iyo huurka badan. Waxaa lagu qeexay xaqiiqda ah in caleemaha iyo ubaxa ay ku daboolan yihiin ubaxyo cadaan ah. Xaaladdan oo kale, qaybo aan caafimaad qabin ee dhirta ayaa laga saaraa, ka dibna ubaxa waxaa lagu daaweeyaa baaruud.
Isbedelada isdhaafka iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Wareeji warshadda beerta ilaa dheriga dayrta. Dareerinta petunia waxay u socotaa guntinta.
Nafaqo wanaagsan ayaa loo doortaa loo yaqaan "grafting" waxaana lagu hayaa meel qabow ah xilliga jiilaalka.
Iska yaree gooynta dhirta ee March, ka saar caleemaha hoose, ka tago 2-3 maroodi ee sare.
Ka hor inta aan la beeri, goynta waxaa loo hayaa dhawr daqiiqo oo Kornevin ah.
Ka dib marka la dhigo biyaha si loo bilaabo rooting ama isla markiiba ku dhajiyay dhulka, daboolay polyetylen. Waxaa la saaraa samaynta caleemo cusub.
Markaad ku korto mini-avunias, waxaa jira khatar ah inay la kulmaan dhibaatooyinka soo socda.:
Xaaqin caleemo. Sababta ayaa ah in ay ku noolaato warshad caarada caarada. Si loola dagaallamo, ubaxa waxaa lagu daaweeyaa acaricide. Sabab kale waxay noqon kartaa qoyaan iyo heerkul sarreeya.
Caleemo huruud ah oo leh la'aanta ifafuur yar iyo bir yaraanta. Magnesium sidoo kale waa muhiim, taasoo ka hortagaysa caleen dayrta.
Geedo yar yar oo leh ciidda xoog leh oo joogtada ah qoyaanka qoyaan leh sababta oo ah kalluunka soo-baxa ee xididdada.
Jaantuska ubaxyada casunias ee petunias waa suurtogal sababtoo ah beeritaanka weel yar iyo cunto la'aanta ciidda. Ama dhirta midna ma helin xoog xoog leh ka dib markii la beero.
Laga soo bilaabo midabyadaas, waxyaabaha aadka u xiiso badan ayaa la helaa. Waxaa loo isticmaalaa xafiisyada xafaayadaha, makhaayadaha, guryaha, balkolada iyo gawaarida. Oo waxa aad u muhiim ah - mini-petunias waxay leedahay difaac sare oo leh xaaladaha cimilada xun, taas oo u oggolaanaysa ubax inuu koro gees kasta oo dalka ka mid ah.